Mutemo weDzimba | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Mutemo weimba
Mvura inoshandiswa mvura yakasara here?
Kuraswa kwemvura isina kuchena kuri kuyerera here? Kuwanikwa kwemvura uye tsvina yetsvina zvakare comm. kubhadhara.M. b. kubva pane zviri muchibvumirano chako zvinotevera sezvazviri kuti mvura (inopisa uye inotonhora mvura) inobhadharwa newaunoshandira, zvichingodaro. services- ...
Ndeipi nguva yaunoda kutarisa kana uchitengesa imba?
Ndirini pandinofanira kutarisa kana ndichitengesa imba? Sezvo iwe uchibvumirana nemutengi, iwe unofanirwa kuongorora. Mumwe munhu anozogutsikana panguva yekuendeswa kwemagwaro, mumwe munhu mushure. Semuenzaniso, isu takakamura mari kuita matatu mapakeji - ...
Ndine kambani SGV-15 2007g Hapana pasipoti, yakarasika. Uye iyo Criminal Code yakakumbira kuti ipe nguva yekuvimbisa pamutsara
Ndine kaunda SGV-15 2007 Hapana pasipoti, yakarasika. Uye iyo Criminal Code yakaraira kuti ipe nguva yekuyera yemamita Nyora chirevo kuCriminal Code uye uratidze kuti pasipoti yarasika, ndinokukumbira kuti utumire mumiriri wako ku ...
Ndiani anofanirwa kugadzirisa mabhokisi emakero muimba yekuvaka?
Ndiani anofanira kugadzirisa mabhokisi etsamba muchivako chemafurati? Dzidzira kuratidza kuti sarudzo dzinogoneka. Chokwadi, mabhokisi etsamba inzvimbo yevagari. asi basa chairo ne "Post yeRussia" inokutendera iwe kuti uise emabhokisi matsva ...
Notarized certificate yekutenga uye kutenga kwekutengesa kwemaimba
Chitupa chakazivikanwa kuti HOLOST inotenga nekutengesa zvivakwa Ichi hachisi chitupa, asi chirevo chakaziviswa kune vane masimba ekunyoresa kuti hauna kuroora. Mutengo wemubvunzo uri zana ...
Ko gweta basa rekutengeswa kwedzimba rinodhura zvakadini?
Marii yakadii gweta kutsigira kutenga kweimba uye kutengesa kutengeserana? Ini ndinogona kukurudzira real estate agency Floor. Ndakatenga imba kuburikidza navo, zvese zvinoita kunge zvakanaka, anga ave makore matatu atove. Ehe, musimboti ...
Nzira yekubatanidza nayo magetsi pachake mushure mekuregedza kwekusabhadhara?
sei kubatanidza magetsi pachawo mushure mekubvisa kweasina kubhadhara? Mubvunzo ndewokuti, nzira yekudambura inoteverwa yekusabhadhara magetsi akapedzwa here? Mutengi wemagetsi kuitira kuti asabhadharwe magetsi akadyiwa anounzwa zvishoma ...
Sample Application kwaZhek
Semuenzaniso kunyorera kuhofisi yeimba mune yemahara fomu ini handigone kukuyambira pane chero sampuro, nekuti ini handishande nematemplate. Asi ini ndinogona kukuyambira kuti usanyore chichemo chakabatana. Wese munhu anofanira kunyora ...
Uye kupi kuti uwane chikamu chekubhadhara vanhu
Uye kupi kwekuwana kondirakiti yebasa renharaunda kuburitsa uye kupedzisa. kana zvisati zvaitika. uye iwe unogara mufurati redunhu nemagariro erente. Enda zvizere. muviri uchaita. zviremera panzvimbo yekugara- ...
Ndeupi musiyano pakati pehutano hwehugaro neimba?
Ndeupi musiyano uripo pakati pechinzvimbo chekugara neimba? Zvirwere zvemanyoka zveimwe mhando. Pfungwa ye "dzimba dzekugara" yakafara zvakanyanya kupfuura iyo pfungwa ye "furati", nekuti inogona kureva zvese imba yakasarudzika uye kamuri ...
Kuzvipira kwenyika yevanhu mu cooperative dacha!
Kugadziriswa kwenzvimbo yakajairika mune dacha mushandirapamwe! Nyika dzakajairika kana minda yeyakajairika chivakwa mumasangano egadheni ndiyo nzira iyo varimi vanomhanyisa kukwira kubindu ravo ...
Zvinokwanisika kunyoresa mwana kumbuya kana vabereki vakanyoreswa kune imwe nzvimbo here?
Zvinoita here kunyoresa mwana nambuya kana vabereki vakanyoreswa kumwe kunhu? Iyo pekugara yemwana asati asvitsa zera regumi ndiyo nzvimbo yekugara yevabereki vake kana mumwe wevabereki, aine ...
Kubhadharwa kweODU Ministry of Regional Development yeRussia Federation netsamba 13.03.2012-AP / 5243 yakanyorwa munaKurume 14, 6 inoshuma zvinotevera. Musi waMay 2011, 354, neDecree XNUMX yeHurumende yeRussian Federation, zvigadziriso zvakagamuchirwa izvo zviri kuitirwa Mitemo yekupa ...
Chii chinosanganiswa munzvimbo inopisa yeimba-corridor, loggia, pantry?
Chii chinosanganisirwa munzvimbo inopisa yeimba-mukoridho, loggia, imba yekuchengetera? mukoridho zvirokwazvo, iyo loggia - kwete. pantry, kana iri mukati, inosanganisirwa. mukoridho uye imba yekuchengetera haina kuiswa munzvimbo yekugara, uye kudziyisa kunobhadharwa zvinoenderana ne ...
Chii chinoreva kushandiswa kwenyika pasi pechivakwa chemba?
Ndeipi poindi yekupa nzvimbo yekuvaka chivakwa chemafurati? Kwete chete PASI PASI, asiwo PEDYO neimba ... Panyaya yenzvimbo yakazvimiririra, varidzi vane kodzero yekuishandisa ivo pachavo, vasina kukumbira mvumo ...
Exchange of municipal municipal apartments
Kuchinjana kweimba yemasisita, edza kutsvaga akati wandei sarudzo nemakamuri. kuitira kuti vhidhiyo ienderane uye mumwe muvakidzani aigara muimba yemunharaunda. uye zvisinei kuti ichave nzvimbo ipi, chinhu chikuru ndechekuti imba yemunharaunda iri mu ...
zvinorevei kugara mufurati revanhu?
zvinorevei kugara mufurati revanhu? imba yekudyara haina kubvisirwa mari, saka mhuri iri kurarama mukuhaya pasocial haina kodzero yekurendesa kamuri, haina kodzero yekutangisa-kutenga imwe imba ...
Chii chinonzi MSW ???
Chii chinonzi MSW ??? раарворарашрагырарваорврррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс muripo MSW chikamu kwerunyararo nevakariri pfuma. Muumbi wako anobhadhariswa faindi pasi peArt. 14.7 yeiyo Administrative Code yeRussian Federation kubva kuRospotrebnadzor. kukweshera kwetsvina. iwe unoda yakasimba imba tsvina ...
Ndapota, ndiudzei nguva yekubhadhara zvinhu zvekushandisa?
Iwe unogona ndapota ndiudzewo mazwi ekubhadharisa ekushandisa? Zvinoenderana nechibvumirano. kusvikira pazuva regumi remwedzi wega wega. Mareti ako anononoka kusvika, saka havana nguva yekuverenga pakaunda. URI nezve ...
Nzira yekuwana sei 13% kubva pakutenga kweimba uye zvipi zvinyorwa zvinodiwa?
sei kuwana 13% yekutenga kweimba uye ndeapi magwaro anodikanwa? Chitupa chemari 2 yemunhu mari yemutero, chibvumirano chekutenga uye chekutengesa, gwaro revaridzi, zvinosungirwa, risiti yemutengesi mukugamuchira mari kubva kwauri ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,619 masekondi.